Chitha ixesha lokuphumla kwigadi entle yengca yasendle, indlu yasefama eneminyaka eyi-100.
I-Anzai Orchard yaqala indawo yokuhlala enamagumbi amabini "ji-kka".
Umlimi olima iipesika, amapere kunye nama-apile kwindawo yemithi yeziqhamo.
Yindlu yabahambi eqhutywa ngumlimi ongaqhelekanga nonika umdla onesitiya esihle esenziwe ngesandla ngumamkeli othanda ingca yasendle kwiminyaka edlulileyo kwaye unegalari yezinto zodongwe.
Kukho indlu yomthi kwindawo, eyakhiwe ngesicelo sikaMnu Shigesato Itoi we "Hobonichi", kwaye kukho iziqhamo ezininzi ezitsha phambi kwethu, ezenza abantwana bajabule.
Ebumelwaneni, kukho iintlobo ngeentlobo zeendawo zokungcebeleka ezishushu ezifana neTakayu Onsen, ezenza abathandi bentwasahlobo eshushu abafihlakeleyo bancwine, Iizaka Onsen, Tsuchiyu Onsen, Numajiri Onsen, kwaye Take Onsen.
IFukushima yindawo apho kukho iibreweri ezininzi ezidunyiswa kakhulu ngabathandi be-sake!
Kwaye iziqhamo ezimnandi eziveliswa ngumahluko kubushushu obukhethekileyo kwisitya.
UFukushima unomoya othobekileyo, kodwa yiyo loo nto kukho iintsikelelo ezininzi ezifihliweyo.
Siza kukwazisa kubantu abahle ngokwenene, iivenkile kunye nezinto ngaphandle kokuzifihla!
Silindele ukuba ulungiselele igumbi elicwangcisiweyo kunye novakalelo lwegalari kunye nobuhle obusebenzisa izinto ezilungileyo zakudala ukuba i-ReBuilding Centre JAPAN Yasebenza ekulungiseni indlu endala yabantu.
Ngapha koko, sisiqhamo samaxesha onyaka. Unokufumana ubumnandi ongazange wabufumana. (Julayi-Disemba)
Ngesizathu esithile, yintsimi yeziqhamo ekhethekileyo apho abantu abadumileyo, abantu abanomdla kunye nezinto zihlangana khona, kwaye amaxesha amaninzi ngonyaka, iMarche kunye nomculo ophilayo ubanjwe kwindawo.
Kwigadi enkulu, kukho indlu yomthi kunye ne-hammock.
Kukho amasimi emifuno neebhokhwe ezingenazibulali zinambuzane.
Umamkeli othanda ingca yasendle, oqhuba igalari yodongwe, wenze isitiya kwiminyaka edlulileyo, kwaye ixesha leti kulo myezo libonakala libuyiselwa kwixesha elitofotofo. iviniga
I-“Jikka” yindlu yeendwendwe encinane kodwa enomtsalane kwaye ethokomeleyo enamagumbi eendwendwe amabini (2) alawulwa yi-“Anzai Family Orchard” yasekuhlaleni elima iipesika, amapere kwakunye nama-apile kwindawo yokulima iziqhamo emaphandleni aseFukushima.
Indlu yeendwendwe iqhutywa kunye negadi yelizwe entle egcinwa ngesandla ngumnini wepropathi othanda ingca yasendle kunye neentyatyambo, kunye negalari yodongwe eyakhiweyo yaza yamiswa kakuhle yadityaniswa nendlu.
Abantwana badlala ngovuyo bejikeleza indlu yemithi eyakhuthazwa ngu-Shigesato Itoi, umbhali owaziwayo weCM kunye nombhali wezincoko ngelo xesha, kwaye yakhiwa kwindawo. Iitoni zeziqhamo ezitsha kanye ukusuka emithini ukuya ngqo etafileni kwaye abantwana bayazithanda.
“IJikka” irhangqwe ngokuqinileyo ziintlobo ngeentlobo ze“Onsen”, imithombo eshushu yasekuhlaleni, kuquka iTakayu, ukhetho oluyimfihlo lomkhohlisi, Iizaka, Tsuchiyu, Numajiri kwakunye noDake, zonke zisebumelwaneni kunye nomgama oqhuba ukusuka kwindlu yeendwendwe. .
I-Fukushima, apho ikhoyo indlu yeendwendwe, yindawo apho uninzi lwemizi-mveliso yewayini yerayisi ebizwa ngokuba yi-“Sake” ethandwa ngokwenene ngabo bonke abathanda isizwe sika-“Sake”, kwaye iziqhamo ezimnandi ngokwenene ziveliswa ngokwahluka kobushushu phakathi kosuku oluveliswayo. ngokukodwa ngokwembonakalo yomhlaba wengingqi.
IFukushima, nangona abantu bethobekile kwaye bathethe izinto eziphantsi, eneneni ineentsikelelo ezininzi zendalo “Jikka” iya kukunika ukudibana okuhle kakhulu nabantu abanobubele ngenene, iimpahla kunye namava amangalisayo okuhamba.
"I-Jikka" iya kukwamkela ngendlu yabantu abadala ehlaziywe yi "Rebuilding Centre Japan" ibuyisela izinto ezindala kodwa zonke ezintle, kunye namagumbi amiswe kakuhle ngumoya wokwenene weegalari zobugcisa.
Kukho imithombo emininzi eshushu ekufutshane kwaye iziqhamo zimnandi! Umjikelo olungileyo usondele kumzimba ophilisa ukukhathala kwaye ugcwalise isisu.
Kukho umsinga weentaba ocacileyo obizwa ngokuba nguMlambo i-Amado, kwaye kuyacetyiswa ukuba uchithe ixesha apho. Kukwakho nendawo yokutyela emnandi yesoba ekufutshane.
Sizakuyeka ukwenza oko okwangoku ukuze sithintele usulelo lwe-coronavirus.